Supercoppa Italia: Allegri oo kaga digay ciyaartoydiisa mid ka mid ah xidigaha Milan, isagoo dhinaca kale fariin u diray Cristiano – Gool FM
Supercoppa Italia: Allegri oo kaga digay ciyaartoydiisa mid ka mid ah xidigaha Milan, isagoo dhinaca kale fariin u diray Cristiano
(Supercoppa Italia) 16 Jan 2019. Macalinka kooxda Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa xaqiijiyay in uu ku faraxsan yahay kulanka ay caawa AC Milan kula ciyaari doonaan koobka Supercoppa Italia magaalada Jeddah ee dalka Saudi Arabia.
Dhinaca kale Massimiliano Allegri ayaa tilmaamay in Gonzalo Higuain uu isku dayi doono kulanka caawa inuu ka aarguto guuldaradii ay la kulantay Rossoneri kulankii horyaalka.
Hadaba Massimiliano Allegri ayaa kahor kulankan wuxuu kasoo muuqday shir jaraa’id wuxuuna ka hadlay dhowr arimood:
“Waa ciyaar hal kulan oo kaliya ah, farqig inoo dhexeeya ee dhanka horyaalka muhiim kama ahan kulankan, waxay noqon doontaa tijaabo fiican ka hor inta aan la gaarin kulanka Champions League”.
“Jeddah waa magaalo qurux badan, jamaahiirta Saudi Arabia waa kuwo cajiib ah, si fiican ayay inoo soo dhaweeyeen, waana kaga mahad celinayaa taas, sidaas darteed waxaan eeganeynaa kulanka xiisaha leh aan ciyaari doono”.
“Waan ku faraxsanahay sababtoo ah kulanka waxaan ku ciyaareynaa halkan, sababtoo ah Talyaaniga cimiladu waa qabow, laakiin halkan jawigu waa mid diiran”.
Dhinaca kale Massimiliano Allegri ayaa tilmaamay in joogitaanka Cristiano Ronaldo ee Juventus, uu isku dayi doono inuu kula guuleysto koobkiisii ugu horeeyay isaga oo matalaya, isla markaana ay haboon tahay inuu ka faa’ideysto.
“Aad ayaan u necbaa Cristiano Ronaldo, wuxuu burburiyay riyadeyda”
Wax ka Ogaaw Taariikh Kooban oo Ku saabsan Xirfada Cayaareed ee Goolhaye Petr Cech kaddib markii uu Shalay ka dhawaajiyay inuu ka fariisanayo Kubbada Cagta